အွန်လိုင်းမှာ ပြန့်နေတဲ့ သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ဆုရရှိသူ မောင်သုတရဲမိုး ရှင်းပြီ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ဖြစ်ရပ်မှန် / အွန်လိုင်းမှာ ပြန့်နေတဲ့ သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ဆုရရှိသူ မောင်သုတရဲမိုး ရှင်းပြီ
အွန်လိုင်းမှာ ပြန့်နေတဲ့ သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ဆုရရှိသူ မောင်သုတရဲမိုး ရှင်းပြီ
Apann Pyay 2:35 PM ပြည်တွင်းသတင်း , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
မကြာသေးခင်က ထွက်ပေါ်လာတဲ့ “တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမရ ကျောင်းသားမှ ကြက်ပေါင်းရည် ကြော်ငြာ ရိုက်ကူးမှုကို ငြင်း ဆို”ဆိုတဲ့ သတင်းမှာ သတင်းမှားဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဆိုပါသတင်းမှာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ ဟာသပုံ စံဖြင့်ေ ရး သားထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းတစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ဆုရရှိသူ မောင်သုတရဲမိုး (အထက ၂ ရန်ကင်း) က အခုလိုပဲရှင်း လင်းပြောကြားထားပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ဆုရရှိသူ မောင်သုတရဲမိုး (အထက ၂ ရန်ကင်း) နှင့်ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက်မှာ” ခုတတ်နေတဲ့ ဘရင်းကြက်ပေါင်းနဲ့ဆရာခိုကိစ္စကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဗျာ့။ညီလေးရဲ့အဖေကလည်းဒီကိစ္စကိုလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းဖြေရှင်းထားပါတယ်။
ဒါပါဘဲအောင်မြင်မှုဆိုတာရယူဖို့ခက်ခဲသလို၊ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းဒီအဆိုးမြင်ဝါဒဖြန့်သမားတွေ့ကြောင့်တည်မြဲနိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ။ ဘယ်နှယ့်ဗျာ့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် မပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကို အဟုတ်လုပ်ပြီး သတင်းဖြန့်နေတာ။
ဒီနှစ်မှာမှတစ်ယောက်ထဲထွက်တဲ့ ဒီပညာပါရမီရှင်လေးကို Myanmar Breaking New Page ကဘလိုမျိုးရည်ရွယ်ချ က်နဲ့တိုက်ခိုက်မှန်းတော့မသိဘူး။ဟာသအနေနဲ့တင်တာပါဆိုရင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ့။ဒီကိစ္စကညီလေးရှေ့လျှောက်မယ့်အနာဂတ်လမ်းကြောင်းမှာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆီမှာ အမြဲတမ်းအလှောင်ခံရမယ့်ကိစ္စပါဗျာ့။
post အာက်မှာ Likeက 10kကျော်တယ်။ ကော်မန့်တွေကလည်း ဆဲဆိုတာတွေ၊ဝေဖန်ထားတာေ တွနည်းတာ မဟုတ် ဘူး။ shareထားတာကလဲ သောက်သောက်လဲ။ တခြားpostတွေတင်ပြီးဟာသတွေလုပ်နေကြတာလည်း စုံလို့။
ဒီဝါဒဖြန့်သမားတွေ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ခုထိ တိုးတတ်မှုနှောင့်နေနေတာ။ ကာယကံရှင်မိသား စုတွေကလည်း ဒီကိစ္စကြောင့်စိတ်ထိခိုက်နေရပြီး ဖြေရှင်းချက်တွေပေးနေရတယ်ဗျာ့။ ခုမှဘဝခရီးလမ်းကို စတင်မယ့် လူရည်ချွန်လေးကို ဒီလိုမျိုး တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာ သူလျှောက်မယ့် အနာဂန်အတွက်များစွာ စိတ်ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်။
ညီလေးသုတရဲမိုး….အောင်မြင်သူတိုင်းအတိုက်ခံဆိုတာရှိစမြဲပဲကွာ ဘယ်တွက်ကြောင့်မှစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ ဖိုက်တင်းညီေ လး သူများတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုယူပြနိုင်ခဲ့လို့လည်းထပ်ဆင့် congratulations ပါညီလေး နောက်ထပ်သ တင်းအ မှားတွေမတင်ဖို့……. အားလုံးကို ရိုသေလေးစားတောင်းပန်လျှက်လျှက်……..” လို့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါတယ်။
မကွာသေးခငျက ထှကျပျေါလာတဲ့ “တဈနိုငျငံလုံး ပထမရ ကြောငျးသားမှ ကွကျပေါငျးရညျ ကွျောငွာ ရိုကျကူးမှုကို ငွငျး ဆို”ဆိုတဲ့ သတငျးမှာ သတငျးမှားဖွဈကွောငျးနဲ့အဆိုပါသတငျးမှာ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှေ ဟာသပုံ စံဖွငျေ့ ရး သားထားခွငျးသာဖွဈကွောငျးတဈနိုငျငံလုံး ပထမ ဆုရရှိသူ မောငျသုတရဲမိုး (အထက ၂ ရနျကငျး) က အခုလိုပဲရှငျး လငျးပွောကွားထားပါတယျ။
တဈနိုငျငံလုံး ပထမ ဆုရရှိသူ မောငျသုတရဲမိုး (အထက ၂ ရနျကငျး) နှငျ့ပတျသကျပွီးရှငျးလငျးခကျြမှာ” ခုတတျနတေဲ့ ဘရငျးကွကျပေါငျးနဲ့ဆရာခိုကိစ်စကလုံးဝမဟုတျပါဘူးဗြာ့။ညီလေးရဲ့အဖကေလညျးဒီကိစ်စကိုလုံးဝမဟုတျကွောငျးဖွရှေငျးထားပါတယျ။
ဒါပါဘဲအောငျမွငျမှုဆိုတာရယူဖို့ခကျခဲသလို၊ရလာတဲ့အောငျမွငျမှုကိုလညျးဒီအဆိုးမွငျဝါဒဖွနျ့သမားတှကွေ့ောငျ့တညျမွဲနိုငျအောငျထိနျးသိမျးနိုငျဖို့ခကျခဲတယျဆိုတာ။ ဘယျနှယျ့ဗြာ့ ကာယကံရှငျကိုယျတိုငျ မပွောခဲ့တဲ့ကိစ်စကို အဟုတျလုပျပွီး သတငျးဖွနျ့နတော။
ဒီနှဈမှာမှတဈယောကျထဲထှကျတဲ့ ဒီပညာပါရမီရှငျလေးကို Myanmar Breaking New Page ကဘလိုမြိုးရညျရှယျခြ ကျနဲ့တိုကျခိုကျမှနျးတော့မသိဘူး။ဟာသအနနေဲ့တငျတာပါဆိုရငျလညျးမလုပျပါနဲ့ဗြာ့။ဒီကိစ်စကညီလေးရှလြေှ့ောကျမယျ့အနာဂတျလမျးကွောငျးမှာ သူ့သူငယျခငျြးတှဆေီမှာ အမွဲတမျးအလှောငျခံရမယျ့ကိစ်စပါဗြာ့။
post အာကျမှာ Likeက 10kကြျောတယျ။ ကျောမနျ့တှကေလညျး ဆဲဆိုတာတှေ၊ဝဖေနျထားတော တှနညျးတာ မဟုတျ ဘူး။ shareထားတာကလဲ သောကျသောကျလဲ။ တခွားpostတှတေငျပွီးဟာသတှလေုပျနကွေတာလညျး စုံလို့။
ဒီဝါဒဖွနျ့သမားတှကွေ့ောငျ့ ကြှနျတျောတို့မွနျမာနိုငျငံတျောကွီး ခုထိ တိုးတတျမှုနှောငျ့နနေတော။ ကာယကံရှငျမိသား စုတှကေလညျး ဒီကိစ်စကွောငျ့စိတျထိခိုကျနရေပွီး ဖွရှေငျးခကျြတှပေေးနရေတယျဗြာ့။ ခုမှဘဝခရီးလမျးကို စတငျမယျ့ လူရညျခြှနျလေးကို ဒီလိုမြိုး တိုကျခိုကျလိုကျတာဟာ သူလြှောကျမယျ့ အနာဂနျအတှကျမြားစှာ စိတျထိခိုကျသှားနိုငျတယျ။
ညီလေးသုတရဲမိုး….အောငျမွငျသူတိုငျးအတိုကျခံဆိုတာရှိစမွဲပဲကှာ ဘယျတှကျကွောငျ့မှစိတျဓာတျမကနြဲ့ ဖိုကျတငျးညေီ လး သူမြားတှမေလုပျနိုငျတဲ့အရာကိုယူပွနိုငျခဲ့လို့လညျးထပျဆငျ့ congratulations ပါညီလေး နောကျထပျသ တငျးအ မှားတှမေတငျဖို့……. အားလုံးကို ရိုသလေေးစားတောငျးပနျလြှကျလြှကျ……..” လို့ ပွနျလညျဖွရှေငျးထားပါတယျ။